ISyk1224 4 Ukuphrinta Umbala Slotting Die Cutting Ngomshini Wokunqwabelanisa
Izinto eziyinhloko zikagesi zonke zivumelanisa umkhiqizo odumile. PLC ukulawula, ezimibalabala touch screen, imvamisa Converter.
Igiya lokudlulisa lamukela i-40 Cr, i-20GrMo Ti yensimbi esezingeni eliphakeme egaywayo, futhi ngemuva kokuphathwa kokushisa, ingafinyelela kwayisithupha · Ati
★ ukwamukela hood ukuncela isakhiwo, ifaniswe ingcindezi fan enamandla enamandla. Igesi
ukunikezela nokulawula kagesi ikhabethe ukugxila ekusebenzeni okufanayo,
ikhava yokusebenza egcwele ikhava evaliwe.
Ukulingiswa kwesihlabathi se-resin ephezulu, ukujiya kodonga okungu-200mm
Izici zokwakhiwa kwesakhiwo: ★ zamukela isakhiwo sokumunca, esifana nengcindezi ephezulu fan enamandla. Ukudonsa ngokuthula, ukunikezwa kwegesi kanye nekhabethe yokulawula kagesi ukugxila ekusebenzeni okufanayo, kude nomsingathi akukhona ngaphansi kwe-1.5m.Uhlangothi olusebenzayo luvale ikhava ephelele.k. Ibhokisi legiya elizimele, isakhiwo sokudlulisa esihlangene jikelele. ★ lukathayela roller impahla zamukele 48CrMo ingxubevange yensimbi, ububanzi lukathayela roller lukathayela main ...
★ i-roller enkulu elukhuni: ￠ 500mm （Ngokuya ngomtshingo uyahluka）, ingcindezi roller ￠ 600mm, preheat roller ￠ 600mm。
★ usebenzisa ukwakheka kwengcindezi engemihle, ukusetshenziswa okuphansi kokushisa, kusiza iphepha eliyinhloko
ukucindezela ngokulinganayo futhi usondele ebusweni borowu lukathayela · · Saka
I-facer ephindwe kabili i-SM-E2
Ubuso bepuleti elishisayo benziwe ngokugaya, ububanzi bepuleti eshisayo600mm, uNgqongqoshe opholisa izinkolelo ezinhlanu 5m.
Ipuleti eshisayo yenziwa yamukele ibhodi lesitsha, isitifiketi sesitsha sokufaka ingcindezi esivaliwe kanye nesitifiketi sokuhlola
★ Ukushisa ipuleti ebusweni ngokugaya ukwelashwa, ipuleti elishisayo ububanzi600mm.
Ibhodi le-preheat lenziwe ngebhodi lesitsha, ngokuya ngezinga likazwelonke lesitsha sokucindezela, lifakwe isitifiketi sesitsha sokucindezela nokuhlola i-ce
Ukushisa ipuleti ebusweni ngokugaya ukwelashwa, ububanzi bepuleti elishisayo 600mm, isamba se-12 yokushisa ipuleti nokupholisa u-4 m.
★ Ukushisa ipuleti ngokukhiqizwa kwebhodi lesitsha, ngokuhambisana nezwe
amazinga womkhumbi wokucindezela wekilasi, onomkhumbi wokucindezela · · ·